I-Leopard Safari Camp Near Jawai Dam
Igumbi lakho lokulala e i-resort sinombuki zindwendwe onguPushpendra Singh
Inkampu ifumaneka kwifama yangasese yeehektare ze-120 kufuphi neJawai Dam & Bera ephakathi kwe-Udaipur neJodhpur. Sinikezela ngeentente ezi-4 ze-A/c zodidi lwaseSwitzerland. Iintente zipholile kwaye zilungele iholide yezilwanyana zasendle. Indawo yethu yokukhempisha ikwalikhaya lethu, kwinxalenye yefama, usapho lwethu luhlala apha ngokwalo kwaye iindwendwe ziyonwabela imfihlo yazo ngaxeshanye. Sinikeza ukutya okumnandi okuphekwe ekhaya okuvela ekhitshini likamama, sonwabele iincasa zaseRajasthani emaphandleni nakwisetingi zenkampu.
Amagumbi aseSwiss Cottage akumhlaba osezantsi kwaye anendawo enengca encanyathiselweyo. Amagumbi abanzi, i-300 square feet ngobukhulu nazo zonke izinto zangoku kwaye ziyilwe ngokoShishino lweHotele. Iza neBathroom encanyathiselweyo, iKing size double-Bed kunye (Iwebhusayithi efihlwe nguAirbnb) inokuhlala abantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2 okanye abantu abadala aba-3 abanebhedi eyongezelelweyo.
Imisebenzi eyenziwa kwinkampu yeengwe ye-varawal ephantsi kwentlawulo:
1. Ingwe Safari
2. Ukubukela iintaka kunye ne-crocodile safari
3. Village Safari
Umbuki zindwendwe ngu- Pushpendra Singh
Ulwamkelo luvuliwe iiyure ezingama-24